LEGO Collectible Minifigures စီးရီး ၂၁ သင်္ဘောပျက် Survivor vignette
LEGO Collectible Minifigures Series 21 vignettes - Shipwreck Survivor
26 / 01 / 2021 27 / 01 / 2021 Justin Winn 1412 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71029 စီးရီး 21, တည်ဆောက်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး 21, စုဆောင်းထားသော Minifigures စီးရီး 21 vignette, Lego, Lego တည်ဆောက်, စီးရီး 21, သင်္ဘောပျက် Survivor
Brick Fanatics နောက်ဆုံးပေါ်အသုတ်များအတွက် vignette ပတ်ဝန်းကျင်၏လတ်ဆတ်သောအစုံနှင့်အတူပြန်ဖြစ်ပါတယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသက် 71029 စီးရီး 21သင်္ဘောပျက်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်သဲကန္တာရကျွန်းတည်ဆောက်မှုနှင့်စတင်ခဲ့သည်။
နောက်ကျော 2016 ခုနှစ်, အ စုဆောင်းထားသောအသေးစား'ဖြန့်ချိခြင်းအချိန်ဇယားသည်တစ်နှစ်လျှင်ပုံမှန်နံပါတ်တစ်စီးရီးတစ်ခုသို့ပြောင်းသွားသည်၊ ၎င်းသည်အခြားလည်ပတ်ရန်အစီအစဉ်နှစ်ခုမှထောက်ပံ့သည်။ ထိုပြောင်းရွှေ့မှုသည်စီးရီးနံပါတ်များနှင့်သူတို့ထုတ်လွှတ်သည့်နှစ်အကြားအဆင်ပြေသည့်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ဖြစ်သည်၊ အသက် 71029 စီးရီး 21.
ဒီနောက်ဆုံးပေါ်မျက်မမြင်စာလုံးတွေဟာအရင် ၁၆ ထက်မတူညီတဲ့အသေးစားပုံစံ ၁၂ ခုပဲရှိပေမယ့်သူတို့ဟာအရောင်တောက်တောက်၊ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစုစည်းတာကိုမရပ်တန့်စေခဲ့ပါဘူး မတူညီသော vignette ၏အခြားအစု , သူတို့ကိုအတွက်သူတို့ကိုအိမ်artတော်တော်လေးဆိုးဝါးသောအခြေအနေ၌မိမိကိုမိမိတွေ့ရှိခဲ့သူ minifigure နှင့်အတူ ing ။
ထပ်မံ၍ သူသည်တောက်ပသောဘက်ကိုကြည့်သင့်သည်။ သူသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပုံရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခုတွင်နေ၊ ပင်လယ်နှင့်သဲတစ်သက်တာရှိသည်။ အကယ်၍ ထိုငါးမန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်တစ်ခုခုရှိပါကအလွန်တိုတောင်းသောအသက်တာဖြစ်နိုင်သည်။
မှုတ်သွင်းခံ vignette အသစ်အတွက်သီတင်းပတ်ကုန်တိုင်းပြန်စစ်ဆေးပါ စုဆောင်းထားသောအသေးစား အသက် 71029 စီးရီး 21။ Justin ရဲ့နောက်ထပ်ကြည့်ဖို့ Lego တည်ဆောက်ပြီးသူ၏ Flickr စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ၊ သူ့လက်ကိုင်သည်ဘယ်မှာလဲ မင်္ဂလာပါ.
← LEGO ပြန်ယူလာနိုင်ပုံ Classic 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာပြီးနောက်ရဲတိုက်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Star Destroyer →
ငါကကလေးသုံးယောက်နဲ့ LEGO အဆောက်အအုံတော်တော်များများကငါ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရပြီးနောက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာကျွန်မရဲ့ 'မှောင်မိုက်သောကာလ' မှအပြည့်အဝပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ LEGO ပရိတ်သတ်ပါ။ ငါ့ရဲ့ပထမဆုံးအချစ်က Classic အာကာသ - သူတို့ကငါပိုင်ပထမ ဦး ဆုံးအစုံ - ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုကိုကျွန်ုပ်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်အဖြစ်ထင်ဟပ်ပြတယ် ကျွန်ုပ်၏ LEGO သည် Flickr တွင်တည်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်လက်ကိုင်မှာ justin_m_winn ဖြစ်သည်။